Isiphandla sezikhali saseLimpopo
Isizinda seLimpopo Coat of Arms sinobumnyama nesibhakabhaka ngesiqubulo - UKUHLANGANISA KWAMANYE NOKUPHAKATHI, okulotshwe emgqulwini omhlophe. Isihlangu sinobukhulu obuphuzi obuhlaza okwesibhakabhaka esinama-crenelations aphezulu phezulu kanye nomuthi we-baobab oluhlaza ngaphakathi.
Umngcele ophezulu wesihlangu uhlaza. Isihlangu sibonisa ukuzibophezela kukahulumeni ukuvikela amalungelo abantu. I-baobab imelela amandla nokuqina kwabantu. Ama-crenelations ayindilinga amelela izintaba nezindawo ezicebile zezolimo zesiFundazwe saseLimpopo. I-cornet esiqongweni sesihlangu ikhonjiswe ngokubomvu negolide ngezingqimba ezinhlanu ze-cycad.
I-cornet ifanekisela ubukhosi. I-cycad iyisitshalo esengozini, efanekisela ukulondolozwa nokuqhutshwa kobuholi bendabuko. Izisekelo ezisekela i-Coat of Arms ziyizinyosi ezimbili, ezimele ubumbano, amandla kanye nokuzinza kwezombangazwe.
Isibonakaliso Sezilwane - Inyathi (Syncerus caffer)
Inyosi yase-Afrika iyisibhakabhaka esikhulu nesinamandla esihlala emhlambini. Womabili ama-buffalos abesilisa nabesifazane anezimpondo, nakuba abesilisa banomphathi obaluleke kakhulu nezimpondo eziphakeme kakhulu kunezinsikazi. Ziyi-grazers eziningi futhi zinethonya elihle emvelweni wazo, ngoba zingaguqula utshani obude zibe utshani obutshani, okunye okukhethwa kukho okunye.
Njengomhlambi omkhulu, bawunyathela futhi baqhube umhlabathi bese baxuba emanzini abo abacebisa umhlaba lapho behamba. Imfucumfucu yesilisa ihlelwe ngokuya ngobukhulu bayo, amandla kanye nokukwazi ukulwa. Abesilisa abakhulu kakhulu bayondla ngaphambi komhlambi futhi phakathi nendawo ukuze banotshani obungenakunqotshwa.
Banikezwa nokuvikeleka okungcono kunazo zonke izilwane ezisendle. Izinkunzi eziphezulu kakhulu zinokufinyelela kangcono kunoma iyiphi inkomo e-oestrus. Uma behlaselwa yizilwane, bavumela ukuhlushwa okucindezelayo okwenza umhlambi wonke uphendule njengomunye. Amathole nezilwane ezincane zivikelekile nezinkomo eziphakathi nendawo lapho amadoda amadala evala isongo.
Isibonakaliso Sesihlahla - i-Baobab (Adansonia digitata)
Izihlahla ze-Baobab zitholakala ezingxenyeni ezisenyakatho zesiFundazwe saseLimpopo, zitholakala kwezinye izingxenye zase-Afrika nase-Australia.
Zingakhula zibe nobukhulu obukhulu futhi zingaphila ekugugile, ukubambisana kwe-carbon kubonisa ukuthi amanye ama-baobabs aphakathi kweminyaka engu-3000 ubudala. Isihlahla esibukeka esingaqondakali, esinamahlamvu asakazeka angabonakala njengezimpande, kunjengokuthi usetshalwe phansi.
I-Baobab inezimbali ezimhlophe ezivuleka ebusuku kuphela futhi zibe nephunga elimnandi, kubantu, noma kunjalo, kufana nokubola inyama ukuheha izinambuzane zamabhodlela namabhantshi ukuze kutholakale impova. Izithelo, ezingakhula ezinyaweni, ziqukethe imbewu ehlanganiswe ne-powder emhlophe, enesithambile C ne-tartaric acid.
Ukhilimu wokuqala we-tartar wenziwa ngembewu ye-baobab. I-baobab phakathi namakhulu eminyaka inikezele indawo yokukhosela, ukondla kanye nemithi kubantu nasezilwaneni ngokufanayo.